Ime anwansi na onyinyo ahụ
Ejiji Ụdị kpakpando
Yana Markova bụ onye ukwu na-ekepụta ihe ndị na-eme n'ọdịnihu. Ogologo oge gara aga, o webatara nchịkọta echiche dị iche iche nke uwe ejiji. Anyị na-akpọ gị òkù ịmatakwu ihe oyiyi ndị dị iche iche, nke ndị nnọchianya a ma ama nke ebe a na-adọtala ogologo oge ma gosipụta azụmahịa.
Ahịa anaghị ezo n'ime
Onye okike aha ọhụrụ a na-akpọ fashion Marịvava, onye na-emepụta nkà sitere na Yekaterinburg. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na Academy of Architecture and Art, Yana na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ uwe. Onye mmebe nke mbido ahụghị ya n'ahịa ahịa. Onye na-ese ihe na-ese foto, ma ihe ndị ahụ yiri ka ha ezughị. Mgbe ahụ, Ọ malitere dorisovyvat ha ụdị ọhụrụ headgear, na-egosipụta na ha obi ike na pụrụ iche fantasies. Ikebịghike ọ bịara doo anya na ihe ntụrụndụ ahụ ga-arụ ọrụ. Ọ gbara arụkwaghịm ma nyefee onwe ya kpamkpam n'uwa dị elu, na-emepụta ihe oyiyi na-enweghị nchefu.
Akụkọ sitere na nwata
Kemgbe ọ bụ nwata, Yana ekiri onye na-abụ abụ na uwe na-adọrọ adọrọ. Couturier na-ekweta na onye nkụzi mbụ ya bụ nne, bụ onye, ​​mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, kụziiri ya otú e si akwa. A na-ejiri aka na-akpụ isi nke mbụ, dị ka ndị ọzọ niile. Iji mezuo ya, onye na-ese ihe jiri nkà na nkà ya niile mee ihe. Nhazi ahụ siri ike, ma ọ bụ mgbe ahụ ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị.
Kedu otu a ga esi esi rụọ ọrụ ahụ
Ọ na-emepụta na ụlọ ihe nkiri, ebe ikuku nke nkà na-achị. Onye isi okwu ọ bụla, foto ọ bụla bụ foto. Nke mbụ, ọ na-eme ihe osise. O nweghị ohere maka nkọwa, textures na nkọwa ziri ezi - nke a bụ ihe osise na-adabere na nke a ga-ewu ihe niile.
Na ọrụ ya, Jan na-eji nkà na ụzụ dị elu. Ụlọ nkwakọba ihe na-ejikọta ya na ihe ọhụrụ, nke onye na-ese ihe na-achọ na ngosi ngosi. Onye edemede ahụ anaghị enwe ihe ịga nke ọma n'ile ihe oyiyi ahụ anya dị ka ọ dịbu: ihe na textiles nwere ọdịdị nke ha, ha dabara n'ụzọ dịgasị iche iche ma dị iche iche na nkọwa dị iche iche. Na usoro nke ịmepụta ihe ọhụụ ọhụrụ, onye na-ese ihe na-emepụta akwụkwọ, ọmụmụ ihe, iche, echiche efu. Ihe e kere eke nke otu ihe oyiyi nwere ike iji ruo otu ọnwa na ọkara nke ọrụ na-aga n'ihu.
Onye ọ bụla ọrụ ya na-eweta ezigbo ma ghara ịtụfu atụmatụ ahụ ọkara ụzọ, n'ihi na n'ihe ọ bụla, ọ na-etinye nnukwu ume, oge na ego.
Style na okomoko n'ime ngwa
Yana Markova kere ụdị onwe ya. Isi isi ya na-agbanwe echiche nke otu ihe eji mara mma kwesịrị ile anya. Mgbe anyị na-apụ apụ, anyị nwere ike ịhụ foto enigmatic, nke ike na mmekọahụ. N'elu Ya na-enwekarị echiche ọhụrụ, onye na-emepụta ihe na-esite n'ike n'ike site na ihe ndị na-agafe agafe. Ọnụ ọgụgụ nke fantasy bụ - ọ na-anọgide na-achọta ụzọ iji ghọta ihe e bu n'uche. Emere ihe ọ bụla n'otu akwụkwọ ma ghara adaba maka ahịa ahịa: ị nwere ike ịhụ ngwa ndị ọzọ na Yana Markova naanị n'èzí nke ihe nkiri, na sinima ma ọ bụ na ngosi ngosi.
Dịka ihe maka ọrụ ahụ, onye na-ese ihe na-ahọrọ ákwà ndị a, ngwa ọla, akpa, Swarovski nkume. A na-edozi akụkụ dị iche iche. E ji ọlaọcha mee otu n'ime ejiji - a ga-enye ha iwu n'ime ụlọ ọrụ ọla.
Stars na-ahọrọ: ihe oyiyi nke Yana Markova na ogbo
Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ kpakpando nke show azụmahịa. N'etiti ndị nwere mmasị na ihe ngosi nke onye mmepụta nkà - Lolita, Eva Polna, Anna Sedokova, ụmụ agbọghọ si "Leningrad Group", Marina Kim, Alina Lanina, Irina Dubtsova na ndị ọzọ a ma ama. Na December 2016, Channel mbụ ga-ahapụ fim ahụ bụ "Mata Hari", nke ndị nkatọ na-asọpụrụ na ememme ahụ na Cannes. A na-eji ejiji na chara eme ihe nkiri Janie Markov.
N'ọdịnihu dị nso, Yana na-eburu uwe elu ya na Hollywood, bụ ebe ọ natara iwu sitere n'aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Ugbu a, ihe oyiyi anwansi nke Yana Markova ga-ahụ ndụ na ihe nkiri vidiyo na vidio egwú. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ ha na ngebichi na anyị ga-enwe ike ile mma a na nkọwa ya niile.
Iji mara banyere creativity nke ika YANA MARKOVA ọ ga-ekwe omume na saịtị www.yanamarkova.com ma ọ bụ na Instagram nke onye na-ese ihe.
Onye dere akwụkwọ foto ndị a nyere: Ekaterina Belinskaya.
Scarlett Johansson na swimsuit
Merlin Monroe na-enweghị etemeete
Ihe omuma nke Alena Doletskaya
Biography nke Monica Bellucci
Ihe nzuzo nke ịma mma nke Vera Brezhneva
Ọnwụ egbugbere ọnụ Olga Buzovoy
Ejiji uwe nke Natalie Portman
Biography Brigitte Macron - ụzọ si n'aka onye nkuzi na nwanyị mbụ
Eva Mendes - oke foto foto
Ihe ndekọ nke Christina Asmus
Ani Lorak Adịrị Isi
12 mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ndị kachasị mma
Nghọta bụ akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu?
Spinner - gịnị ka ọ bụ na otu esi eme spinner n'ụlọ?
Ọnụ mpempe agba maka ụlọ
Ole calorie ole dị na kuki oatmeal?
Uwe Obere Nwanyi
Onye na-akwado Britney Spears na-atụ egwu ya ka ọ nwụọ n'oge egwu
Ịgba ọgwụ maka ụmụ puppị
Ebe redio Grimeton
A na-ekpo ọkụ nke ubi cucumbers - esi mee ka ụbịa?
Ejiji akpụkpọ ụkwụ - mmiri 2014
Ezigbo uwe mwụda 2013
Ụdị ejiji Fall-Winter 2012
Dali Museum na Figueres
Ihe nkpuchi maka nwa amụrụ ọhụrụ bụ nhọrọ dị mkpa na nhazi nke kacha mma
Ihe ndị na-eme ka ọbara na-amalite
Ngwá ụlọ maka ọrụ ime
ARI na ARVI - iche